HTOO LAENNEC CLINIC
Treasure For Life Co., Ltd. was established in February, 2010 as trading and general commercial company. Managing director, Daw Htoo Htoo Aung founded the company and the company registration number is 1713/ 2009-2010. It was with the capital of 100 millions kyats.
Treasure For Life Co., Ltd. သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းတွင် ရောင်းဝယ်ရေးနှင့် အထွေထွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ထူးထူးအောင်မှ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာအဖြစ် ကုမ္ပဏီကိုဦးစီးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး၊ ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်အမှတ်မှာ ၁၇၁၃/၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဖြစ်ပါသည်။ မတည်ရင်းနှီး ငွေကျပ် သိန်းပေါင်းတစ်ထောင်ဖြင့် ကုမ္ပဏီကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
We opened the Branch office and Showroom in 2013 and Htoo ( LAENNEC ) Clinic in 2014. In addition, we branched out “ Treasure Beauty & Spa ” in 2016.
ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Treasure For Life Co., Ltd. ရုံးခွဲ နှင့် အရောင်းပြခန်းကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ထူး ( LAENNEC ) ဆေးခန်းအား ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Treasure Beauty & Spa အား တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
Treasure For Life Co., Ltd. mainly intends to distribute effective medicines, supplement and consumer products to the people in the standardized product, reasonable price, quality product, well wishes and to be healthy physically and mentally. Similarly, we plan to provide the people in their life with supports such as health, religious affairs more and more.
Treasure For Life Co., Ltd. သည် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအမြတ်အစွန်းကို အဓိကမထားဘဲ မိဘပြည်သူအားလုံးအတွက် ထိရောက်အကျိုးရှိ အသုံးတည့်၍ စိတ်ချယုံကြည်ရသောဆေးဝါးများ၊ ကျန်းမာရေး ဖြည့်စွက်အစာများနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများအား ပစ္စည်းမှန်၊ ဈေးနှုန်းမှန်၊ အရည်အသွေးမှန်၊ စိတ်စေတနာမှန်တို့ဖြင့် စံချိန်မှီပစ္စည်းများအားသုံးစွဲနိုင်စေရန် ပြည်သူတို့၏ ကိုယ်ကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာစေရေးကိုသာ ဦးစားပေး၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု အဓိကရည်ရွယ်ထားပါသည်။ အလားတူစွာ မိဘပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် သာသနာရေးတို့ကိုလည်း ဆထက်တံပိုး ဖြည့်ဆည်းသွားနိုင်မည့် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲထားပါသည်။
We do and cooperate with Myanmar Native Land Public Co., Ltd as our brother company and some partner companies. We would like to invite the other interested companies in same and different sectors to join together with our company.
ညီအစ်ကိုကုမ္ပဏီဖြစ်သော Myanmar Native Land Public Co.,Ltd. တို့အပြင် အခြားမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီအချို့နှင့်လည်း ဆက်သွယ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မတူညီကွဲပြားသော လုပ်ငန်းအရသော်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းတူညီအသွင်တူအရသော်လည်းကောင်း စိတ်ပါဝင်စားသော မိတ်ဆွေ သဟာယ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အသင်းအဖွဲ့အစည်းကုမ္ပဏီများအားလည်း လာရောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုပါသည်။
To provide our clients with the good health and long lasting of human beings including Myanmar citizens and found “ Foundation ” which can support to be healthy life.
မြန်မာနိုင်ငံသားများ အပါအဝင် လူသားတို့အတွက် အသက်ရှည်ကျန်းမာမှုအား အထောက်အကူပြုသည့် အပြင် အကျိုးထူးများဖြစ်ထွန်းစေမည့် ဆေးဝါးများ၊ ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်အစာများ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားနိုင်ရန်နှင့် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုသည့် ဖောင်ဒေးရှင်း တည်ထောင်နိုင်ရန်။
To distribute the effective medicines, supplement and consumer products
အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ဆေးဝါးများ၊ ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်အစာများ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများအား တင်သွင်း ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားရန်။
To distribute the products to consumer the standardized product, reasonable price, quality product, well wishes with best services
ပစ္စည်းမှန်၊ ဈေးနှုန်းမှန်၊ အရည်အသွေးမှန်၊ စိတ်စေတနာမှန်ဖြင့် နိုင်ငံအတွင်း လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်စေရေးအတွက် မိဘပြည်သူအပေါင်းတို့အား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်၍ ကုန်ပစ္စည်းများအား တင်သွင်းထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားရန်။
To do seminar or campaign to be improved the healthy knowledge
ကျန်းမာရေးအသိပညာ တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန် ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲများ ဦးဆောင်ပြုလုပ်ရန်။
Name of Business Treasure For Life Co., Ltd
Form of Business Trading
Registration No.1713/ 2009-2010
Authorization by The Government of The Union of
Myanmar,Ministry of National Planning and Economic Development on 19th Feb 2010
Head Office No. 555, Marga 10 St,12 Ward, South Okkalapa Tsp, Yangon, Myanmar.
Branch Office, Showroom & Clinic No. 694, Thitsar Road, 6th Ward, South Okkalapa Tsp, Yangon, Myanmar.
SPA Beauty Center ( Branch ) “ Treasure Beauty & Spa ”
No. 20, Shin Sawpu Pagoda Street, Sanchaung Road, Yangon, Myanmar.
Founder Ms. Htoo Htoo Aung
Initial Capital 100 Millions Kyats
Purpose of Business To distribute the products and devices, Skin care as well as Personal goods which can support human beings with suitable prices
Company Overview Specialize in Trading of Medicine, Medical Equipment, Health Care, Skin Care & Personal Goods, etc…
General Information To offer the Maintenance of Health, Beauty & Youth with satisfied service to the Clients.
Clinic Name ထူး ( LAENNEC ) Clinic
Mission To establish “ Liver Foundation ” as Founder
Partner Companies Myanmar Native Land Public Co., Ltd.
Perfect Dream Construction Co., Ltd.
Contact No. 09-421310000, 09-254087779
Hot Line : 09-254087779
Office Tel : 09-421310000
Email : sale.marketing.tfl2013@gmail.com
Address : No. ( 643-A ), 1st Floor, Pyi Thar Yar Street, ( 16/4 ) Ward, Thingangyun Township, Yangon, Myanmar.
Mon to Wed - 10:00 AM to 7:00 PM
Fri to Sat - 10:00 AM to 7:00 PM
Mon to Fri - 09:00 AM to 5:00 PM
Sat - 09:00 AM to 1:00 PM
WORLD LEADING COMPANY IN PLACENTAL EXTRACTS AND NANONEEDLES
©2016 by Treasure for Life